Biography na nchoputa banyere mbara igwe nke Galileo Galilei | Network Meteorology
Na ụwa nke physics na mbara igwe, e nweela ọtụtụ echiche na-achị ugbu a. Nke mbu, ka ha akowa otu igwe na uwa si agha, ha gwara anyi na uwa bu ebe etiti eluigwe na ala di n’ime tutuu ala. Emechaa, ekele Nicolaus Copernicus, na nke ya heliocentric tiori, a maara na Anyanwụ bụ etiti nke Usoro anyanwụ. Mgbe mgbanwe nke heliocentrism, a tụlere nna sayensị nke oge a Galileo Galilei. Ọ bụ ihe gbasara onye sayensị n ’Itali nke kpụrụ iwu izizi gbasara ije. O wetara ọganihu dị ukwuu na ụwa nke mbara igwe dị ka anyị ga-ahụ na post a.
You chọrọ ịmatakwu banyere Galileo Galilei? Lee, anyị na-agwa gị ihe niile.
2 Akpa teliskop
3 Nchọpụta mbara igwe
A mụrụ Galileo Galilei na Pisa na 1564. Site na ụfọdụ akwụkwọ ozi, anyị nwere ike ịmara banyere nne ya. Nna nna, Vincenzo Galili, bụ onye Florentine ma si n'ezinụlọ na-eme nke ọma kemgbe. Ọ bụ onye ọkaibe site na ọrụ ya, n'agbanyeghị na nsogbu akụ na ụba manyere ya ịrara onwe ya nye azụmahịa. Site na nna ya, Galileo keta uto maka egwu na agwa onwe ya. N'ihi mmụọ ọgụ a, ọ ga-ekwe omume ịga n'ihu na ụwa nke nyocha.
Na 1581 ọ malitere ịmụ akwụkwọ na Mahadum Pisa, ebe o nwere ike idebanye aha na ụwa ọgwụ. Mgbe afọ 4 gachara, ọ hapụrụ ya n’enwetaghị aha ọ bụla, n’agbanyeghị na ọ maara ọtụtụ ihe banyere Aristotle. Ọ bụ ezie na ọ enwetaghị akara ugo mmụta, ọ malitere ụwa nke mgbakọ na mwepụ. Ọ raara afọ ụfọdụ nke ndụ ya raara nye mgbakọ na mwepụ na-enwekwa mmasị na ihe niile bụ nkà ihe ọmụma na akwụkwọ. Mgbe o nyechara klaasị nnwale na Florence na Siena, ọ gbalịrị inweta ọrụ na Mahadum Bologna, Padua na Florence n’onwe ya.
Ọ dịlarị na Pisa ka Galileo dere ederede na ngagharị ma katọọ nkọwa Aristotle banyere ozu na ihe ngagharị. Ma ọ bụ na Aristotle, Puku afọ abụọ tupu mgbe ahụ, ọ kwupụtara na ozu ndị ka arọ dara dara ngwa ngwa. Galileo gosipụtara na nke a bụ ụgha site n’ịda ozu abụọ nwere ibu dị iche iche n’elu elu ụlọ elu ahụ n’otu oge. Ha nwere ike ịdị iche na ha kụrụ ala n'otu oge.
Ọ lekwasịrị anya n'ịchọpụta eziokwu ma tinye ya n'ọnọdụ ndị ọ nwere ike ijikwa na ịme nnwale nwere atụ.
Mgbe nna ya nwụrụ na 1591, a manyere Galileo ilekọta ezinụlọ ya. N'ihi nke a, ụfọdụ nsogbu akụ na ụba malitere nke ka njọ n'afọ ole na ole. Na 1602 ọ nwere ike ịmaliteghachi ọmụmụ ihe ọ malitere na njem ahụ ọ malitere site na isochronism nke pendulum na mmegharị ya na ụgbọ elu nwere mmasị. Site n'ọmụmụ ihe ndị a ọ nwara ịkwado ihe iwu nke ọdịda nke bass bụ. Na 1609 o meputara echiche ya nile nke nyere aka ibiputa oru ya nke anakpo » Okwu na ngosipụta mgbakọ na mwepụ na gburugburu sayensị ọhụrụ abụọ (1638) ».
N'ime otu afọ ahụ ọ gara Venice ịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa ma nwee akụkọ banyere ịdị adị nke ngwa ọrụ ọhụụ eji eme ihe iji hụ site n'ebe dị anya. Ọ bụ mgbe ahụ ka Galileo Galilei raara onwe ya nye ọtụtụ afọ nke mgbalị iji meziwanye ma mee ka ọ bụrụ teliskop mbụ.
Mgbe ahụ ọ ghọrọ nwoke nke mepụtara ngwa ọrụ dịbu na nke bara nnukwu uru na sayensị na ịmara ihe niile anyị nwere na mpụga ụwa. Na 1610 emere ihe mbu nke ọnwa. Ọ kọwara na ihe ọ hụrụ bụ ihe akaebe na-egosi na ugwu dị na satịlaịtị anyị.
Mgbe ị chọtara satịlaịtị 4 nke Jupita, Ọ nwere ike ịmata na ụwa abụghị ebe etiti mmegharị niile. Na mgbakwunye, ọ nwere ike ịchọpụta na Venus nwere ụfọdụ usoro yiri nke ọnwa. Nke a bụ otu esi enweta usoro heliocentric nke Copernicus. Galileo dere ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ n'ihi na ọ chọrọ ime ka a mata ihe niile ọ chọtara. N'oge na-adịghị anya tupu amata ya maka ọrụ ya The Sidereal Messenger. Johannes kepler Enweghị m ntụkwasị obi na mbụ. Ma, ka oge na-aga, ọ bịara hụ ihe niile mere e ji jiri teliskop ahụ na-arụ.
Nchọpụta mbara igwe
O weputara otutu akwukwo ozi nke o nyere ihe akaebe doro anya banyere uzo dum nke mbara. O kwukwara na ule niile a bụ nke ha nyere Copernicus ike iju usoro Ptolemy geocentric. N'oge a, ọ dị mwute ikwu na echiche ndị a masịrị ndị na-ajụ ajụjụ. Agbanyeghị, ha rụrụ ụka maka azịza megidere ya wee malite iche na Copernicus bụ onye jụrụ okwukwe.
Oge ikpeazụ nke ndụ Galileo Galilei malitere mgbe ọ biri na Florence na 1610. N'ime afọ ndị a, e bipụtalarị akwụkwọ banyere ntụpọ anyanwụ nke onye Jesuit Germanit Christof Scheiner chọtara. Galileo ahụlarị mbadamba anyanwụ ndị a ma gosi ha ụfọdụ ndị dị mkpa mgbe ọ nọ na Rom. Njem a o mere na Rome nyeere ya aka nke ukwuu dịka ọ ghọrọ onye otu Accademia dei Lincei. Otu a bụ nke mbụ raara nye sayensị nke dịrị oge.
Na 1613 nyocha mbara igwe banyere Akụkọ ihe mere eme na ngosipụta banyere ọdịda anyanwụ na ihe ọghọm ha, ebe Galileo batara imegide nkọwa Scheiner. Onye Jesuit nke German chere na ntụpọ ndị ahụ bụ mmetụta pụrụ iche. Ederede malitere nnukwu esemokwu banyere onye mbụ chọtara ntụpọ anyanwụ. Nke a mere ndị Jesuit ghọrọ onye iro kachasi Galileo Galilei obi na ngalaba sayensi na nyocha.
N’ezie, ihe a niile ruru na nyocha. A kpọrọ Galileo na Rom ịza ụfọdụ ebubo. Ewere igwe na-enyocha mbara igwe were nkwanye ugwu dị ukwuu n'obodo ahụ, ka arụmụka banyere ebubo ya na-aga n'ihu, ndị nyocha ahụ agaghị ehulata ogwe aka ha ma ọ bụ jiri obi ha soro ezigbo arụmụka ọ na-ahapụ.
N’afọ 1616, ọ natara ndụmọdụ ka ọ ghara ịkụzi ozizi Copernicus n’ihu ọha. N'ikpeazụ, mgbe ọ dị afọ 70, Galileo abụworị nwoke maara ihe ma Ọ nwụrụ na chi ọbụbọ na Jenụwarị 9, 1642.
Enwere m olileanya na akụkọ ndụ Galileo Galilei na-enyere gị aka ịmatakwu banyere ndị sayensị ndị gbanwere mbara igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Galileo Galilei